𝐓𝐫𝐢𝐩 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 to 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞
[𝐓𝐫𝐢𝐩 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲: 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞]
Singapore Ministry of Health (MOH) မှထုတ်ပြန်ချက်အရ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့သွာရောက်မည့် ခရီးသည်များအားလုံး (Singapore Citizen နှင့် Permanent Resident များအပါအဝင်) စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မထွက်ခွာမှီ (၄၈) နာရီအတွင်း စစ်ဆေးထားသော COVID-19 ရောဂါကင်းရှင်းသည့် Polymerase Chain Reaction (PCR) test result ပါရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။
COVID-19 PCR Negative Test Result ပြသရန်မလိုအပ်သူများ
အသက် (၃)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့မသွားရောက်မီ (၂၁)ရက်အတွင်း ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်ဝမ် သို့သာ ခရီးသွားထားသောသူများ
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှ PCR Test စစ်ဆေးရန်မလိုကြောင်း Exemption Letter ရရှိထားသူများ
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် သွားရောက်မည့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် မိမိ စီးနင်းလိုက်ပါမည့် လေယာဉ်၏ထွက်ခွာချိန် မတိုင်မှီ (၄၈)နာရီအတွင်းစစ်ဆေးထားသော COVID-19 PCR Test (Negative Result) ကိုပြသပေးရမည် ဟုဆိုရာမှာ ဥပမာ - လေယာဉ်ထွက်ခွာမည့်ရက် (10 September 2021)ဖြစ်ခဲ့သော် COVID-19 PCR Test အား (8 September 2021) ထက် စော၍စစ်ဆေးခြင်း မပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် COVID-19 PCR Test (Negative Test Result) အပြင် နိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်အခြားလိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ စုံလင်စွာပြသနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများ၏ အသေးစိတ်ကို SafeTravel Website (https://safetravel.ica.gov.sg) နှင့် Frequently Asked Questions (FAQs) များအား (https://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pcrtest) website များတွင်လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။
According to the announcement of Ministry of Health Singapore, all passengers (including Singapore Citizens & Permanent Residents) entering Singapore, or transiting/ transferring through Singapore who have been in any country or region, except Hong Kong, Macao, Mainland China and Taiwan in the last 21 consecutive days before departure for Singapore, are required to takeaCOVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) test within 48 hours of their flights to Singapore.
The following passengers do not need to presentavalid negative COVID-19 PCR test:
Passengers who have only had travel history to Hong Kong, Macao, Mainland China and Taiwan within the last 21 days before departure for Singapore
Passengers who have been issued withaletter byarelevant Singapore Government Agency exempting them from the requirements forapre-departure PCR test
For passengers on non-stop flights to Singapore, the period of 48 hours will commence from the scheduled departure day of the flight to Singapore. For example, if the flight is scheduled to depart on 10 September 2021, the COVID-19 PCR test must be taken no earlier than 8 September 2021.
NOTE: The requirement to takeaCOVID-19 PCR test within 48 hours before departure is in addition to existing prevailing entry requirements and border health measures for all passengers entering Singapore. For more information on Singapore’s entry requirements, please refer to the SafeTravel Website (https://safetravel.ica.gov.sg). The related Frequently Asked Questions (FAQs) can be found at (https://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pcrtest)